Maurizio Sarri oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan bixitaanka laba xidig ka tirsan kooxda Chelsea – Gool FM
Maurizio Sarri oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan bixitaanka laba xidig ka tirsan kooxda Chelsea
Dajiye January 8, 2019
(Chelsea) 08 Jan 2019. Macalinka kooxda Chelsea Maurizio Sarri ayaa wuxuu shaaca ka qaaday go’aamada ay Cesc Fàbregas iyo Callum Hudson ay ugu kala biirayaan kooxaha Monaco iyo Bayern Munich, kadib markii ay soo baxeen sacadihii lasoo dhaafay warar sidaas tilmaamaya.
Chelsea ayaa haatan isku diyaarineysa kulanka ay Tottenham Hotspur kula ciyaari doonaan tartanka Carabao Cup
Maurizio Sarri ayaa kasoo hor muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay caawa wajihi doonaan kooxda Tottenham Hotspur, wuxuuna ka hadlay dhowr arimood ee ku saabsan kooxdiisa Chelsea wuxuuna yiri:
“Ma naqaano xaalada Willian, Olivier Giroud iyo Pedro, waxay qabanayaan shaqo fiican, waxayna tababarka la qaadanayaan saaxiibadood”.
“Ma aqaano hadii ay ciyaari karaan kulanka Tottenham Hotspur, laakiin Ruben Loftus-Cheek, wuxuu ka maqnaan doonaa kulankan, waxaan u baahanahay inaan ogaano heerka uu gaarsiisan yahay xanuunka uu qabo”.
Intaas kadib Maurizio Sarri ayaa wuxuu ka hadlay wararka ku aadan in xidigaha Cesc Fàbregas iyo Callum Hudson ay ka tagi doonaan kooxda Chelsea wuxuuna yiri:
“Ma doonayo ciyaartoyda kooxaha kale, hadii uu doonayo Fàbregas inuu baxo waxaan u baahanahay badalkiisa, ma aqaano hadii uu Loftus-Cheek halis noqon doono, la’aanta Cesc waxaan heysanaa 5 oo kaliya, sidaas darteed waxaan u baahanahay badalkiisa”.
“Callum Hudson waa ciyaaryahan aad muhiim u ah, waa da’ayar wuxuuna sameenayaa horumar, gaar ahaan qeybta difaaca, waana ku faraxsanahay isaga, ma garanayo go’aanka kooxda, laakiin aniga ahaan waa ciyaaryahan muhiim ah”.
“Uma maleenayo inuu u dhaqaaqi doono Germany, waa ciyaaryahan reer England ah, wuxuuna mustaqbal wanaagsan ku dhex leeyahay halkan gudaha England, xulkiisa iyo kooxdiisa Chelsea”.